ရယျစရာ Archives - MM Live News
မင်ျဂလာဦးညမှာ သတိပါလဈသှားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီးရဲ့အဖွဈ…
February 24, 2020 MM Live News
မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီးရဲ့အဖြစ် ” မင်္ဂလာဦး ည ရင်ခုန်သံ ” ” အားးးးးးး!!!” ​အော်​သံကြား​ပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲ​လေဆိုပြီး အိမ်​သားများ မသိချင်​​ယောင်​​ ဆောင်​​နေလိုက်​သည်​​ ။ မင်္ဂလာဦးည​ပေကိုး…. အော်​သံကြားပြီး သိပ်​မကြာလိုက်​… လူပြိုကြီး​ Moe Aung အသံနက်​ကြီးဖြင့်​ ” အ​မေနဲ့အ​ဖေတို့ရေလာကြပါဦး ဘာဖြစ်​သွားလဲမသိဘူး ” “ဟာဒုက္ခ​တော့များပြီနဲ့တူတယ်​ ​ယောက်ျား​ရေ​…. တော့သားကို သွားကြည့်​ဦး´” သိပ်​မကြာလိုက်​ အ​ဖေဖြစ်​သူမှ ထပ်​​အော်​ပြန်​သည်​ ။ “ မင့်း​ချွေးမသတိမလည်​​တော့ဘူးဟ ဆရာဝန်​ အမြန်​​ခေါ် ” ” ဘာ​တွေဖြစ်​ကုန်​လဲမသိ ” ကိုယ်​လဲတက်​မကြည့်​ရဲ ​သွေးသန်​ရဲရဲ​တွေ မမြင်​ရဲဘူး အိမ်​ထဲကရုပ်​ရုပ်​သည်းသည်း အသံ​တွေ​ကြောင့်​ ဘေးအိမ်​ကလူများ ပါ​ရောက်​လာကြသည်​…. သိပ်​မကြာလိုက်​….“လမ်းဖယ်​လမ်းဖယ်​ ဆရာလာပြီ´” အ​ဖေကြီးက “မင်းဘယ်​လိုလုပ်​လိုက်​တာလဲ ဆရာ့ကို​ပြောပြလိုက်​´´” […]
အိမျရှငျ ကြောငျးဆရာမရဲ့ ယောကျြား နှငျ့ ရုပျခြောလှတဲ့ အိမျဖျောမ ဇာတျလမျး…
January 11, 2020 MM Live
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့က ပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော် နဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေး က ပြသနာရှိလာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူက အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကို မိန်းမဖြစ်သူ ဆရာမက ” ရှင့် အိမ်ဖော်ကလည်း ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့ ” ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုမိုးကြီးက ပြန်ပြောတယ် ” ချောလား မချောလား မသိပါဘူးကွာ အဝတ်လျှော် […]
December 10, 2019 December 10, 2019 MM Live
မရယ်ဘူးဟုအာမခံမှဖတ်ပါ လူသုံးယောက် သင်္ဘောတစင်းစီးပြီး ခရီးထွက်လာကြတယ်….. သဘောင်္ကလမ်းမှာပျက်သွားတယ်…. သူတို့သဘောင်္ပျက်သွားတဲ့နားက ကျွန်းက လူသားစားတဲ့ လူရိုင်းတွေနေတဲ့ကျွန်း……… လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- မင်းတို့သုံးယောက်ကို သတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်.. လူသုံးယောက်- မလုပ်ပါနဲ့…ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပေးပါ့မယ်.. အသက်တော့ ချမ်းသာပေးပါ………. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- ဒါဆို မင်းတို့ကိုနာရီဝက် အချိန်ပေးမယ်…. အမျိုးတူအသီး(၁၀)လုံးယူလာခဲ့ကြ၊ဒါဆိုရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်… အဲဒီ့တဆင့် အောင်မြင်သွားရင် နောက်တဆင့်ထပ်ခိုင်းမယ်… အဲ့ဒါပါ လုပ်နိုင်ရင် မင်းတို့မြို့ကို ပြန်တဲ့လမ်းပြပေးမယ်၊ညွှန်ပေးလိုက်မယ်။ (၁၅)မိနစ်ခန့်အကြာ…………. ………… ပထမလူ- ပန်းသီး(၁၀)လုံးနဲ့ပြန်လာတယ်၊ လူရိုင်းခေါင်းဆောင်-ကဲမင်းက ပထမအဆင့်တော့ အောင်သွားပြီ…. ဒုတိယအဆင့်ကို ခိုင်းမယ်၊ မင်းယူလာတဲ့အသီး(၁၀)လုံးကို တလုံးချင်းစီ ဖင်ထဲထည့်ရမယ်။ ထည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမငိုရ၊မရယ်ရ မမဲ့ရ၊မအော်ရ၊အမူရာမပျက်ရဘူး….. တကယ့်လို့အမူရာ ပျက်ခဲ့ရင် မင်းကိုသတ်မယ်၊မပျက်ရင်တော့ မင်းပြန်လိုတဲ့လမ်းကိုညွန်မယ်.. ပထမလူ- ပန်းသီး(၅)လုံးမြောက်မှာ မျက်နှာမဲ့သွားတယ်… လူရိုင်းခေါင်ဆောင်- သတ်စေ……………………………. (၂၅)မိနစ်ခန့်ကြာသော်…………. ဒုတိယလူ- ညောင်သီး(၁၀)လုံးနဲ့ ပြန်လာတယ်…. […]
သားမကျက ညကရြငျပှဲကွမျးဖို့ ဝယျထားတဲ့ ခှေးလြားနကျစတှေ့ကေို ယောက်ခထီးကွီးက အကုနျကွိတျလိုကျသောအခါ…
December 10, 2019 MM Live
သားမက်က ညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေကို ယောက္ခထီးကြီးက အကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ ကျား အားတိုး​ဆေးထဲမာခွေးလျားနက်စေ့အကြောင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ” မကြင်​မြ..” ” ​​ဘာတုန်းကို​ဆောင်း ” ” ငါ့ ​ခွေး​လှေးယားသီး အနက်​​စေ့​တွေ ဘယ်​မတုန်း” ” ဟင်​…..ကျုပ်​လည်း ဘယ်​သိမတုန်း ၊ ​တော်​ကဘယ်​မှာထားလို့လဲ ” ” ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ် တင်​ထားတာ​လေ ”မောင်​​ဆောင်း အ​တော်​​ဒေါသထွက်​မိတယ်​။ ဘယ့်​နှယ်​ဗျာ…​ခွေး​လှေးယားသီးအနက်​​စေ့က ကျားခွန်​အားတိုးတယ်​ဆိုလို့ ဝယ်​စားပါတယ်​ ။ ဘယ်​သူမှ မစား​လောက်​ပါဘူး​လေဆိုပြီး ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ်တင်​ထားကာမှ ​ပျောက်​ချင်းမလှ​ပျောက် သွား​တော့ ​ဒေါသမထွက်​ပဲရှိမလား ။ ” င​ဆောင်း.. ” ” ဗျာ..အ​ဖေ ” ” ခဏလာဦး…​မောင်​​ဆောင်းရဲ့ ​ယောက္ခထီးကလှမ်း​ခေါ်​တော့ ​မောင်​​ဆောင်းလည်း ​ဒေါသကိုချုပ်​တည်းပြီး ​ယောက္ခထီးဆီသွားရတာ​ပေါ့ ။ ” ​ခွေး​လှေးယားသီးအ​စေ့ကို […]
သခြိုငျးထဲက ဝစေုခှဲနတေဲ့ အသံတှကွေောငျ့ ပွေးလိုကျတာ ခြျောလဲ သပိတျကှဲ ဆှမျးငတျခဲ့ရတဲ့ ဆရာတျော
နောက်ကျတဲ့ခြေထောက်သစ္စာဖောက် ကလေးနှစ်ယောက် မာလကာခြံထဲကို ပိုင်ရှင်မသိအောင် ဝင်ပြီး အသီးတွေ ခိုးကြတယ်။ ရသမျှအသီးတွေကို ပုဆိုးတွေထဲ ထည့်ထုပ်ပြီး ဝေစုခွဲဖို့ လူပြတ်တဲ့သင်္ချိုင်းထဲကို သွားကြတယ်။ ပိုင်ရှင်သိရင် လိုက်ဖမ်းမှာစိုးလို့ အပြေးသွားတာမို့ အသီးအချို့ သင်္ချိုင်းဝမှာ ကျကျန်နေခဲ့တယ်။ အထဲရောက်တော့ ကလေးအကြီးကဦးဆောင်ပြီး ဝေစုခွဲပေးတယ်။ “ဒါက မင်းစားဖို့ ၊ ဒါက ငါစားဖို့ ဒါက မင်းစားဖို့၊ ဒါက ငါစားဖို့…” အဲဒီလို တစ်လုံးခြင်းစီ ဝေစုခွဲနေတဲ့ အသံကို သင်္ချိုင်းအစပ်က လမ်လျှောက်လာတဲ့ ရွာသားက ကြားတော့ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ရွာထဲဝင်ပြေးတယ်။ ရွာထဲရောက်တော့ ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ တွေ့တော့ အားကိုးရာရပြီဆိုပြီး အကူအညီတောင်းလျှောက်ထားတယ်။ “ဘုန်းဘုန်းဘုရား။ ကယ်ပါအုံးဘုရား။ ရွာက သင်္ချိုင်းထဲမှာ သရဲတွေ သောင်းကြမ်းနေပါတယ် ဘုရား […]
ဖဲရိုကျပွနျလာ တာတောငျအိမျက မိနျးမက ထိုငျရှိခိုးရတဲ့ မောငျခှေးရဲ့အကွံ…
ည ၉ နာရီလောက် လင်မယား၂ ယောက် အိမ်ပြန်ကြတော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ မျက်နှာဖုံးစွတ်နဲ့လူ ၄ယောက်ထွက်လာပါတယ်… ဓါးကိုစီကိုင်ထားပြီးတော့..ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလို့ထင်ရတဲ့သူက…” လက်မြှောက်ထားပါ အော်မယ်မကြံနဲ့….ဓါးကမျက်စိမပါဘူး… မင်းတို့ ၂ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်နေခဲ့ရမယ်…ပြန်ပေးဆွဲတာပါ…. ရဲတိုင်ရင်တော့ အလောင်းလာကောက်ရမယ်…ဘယ်သူနေခဲ့မလဲပြော… “ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ချက်ချင်းရင်ကိုကော့ကာ…. “ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်….မိန်းမကိုပြန်လွတ်ပေးပါ…. မိန်းမ မင်းအိမ်ပြန်နှင့်ရဲမတိုင်နဲ့နော်…. ငါသူတို့နဲ့ညှိနိုင်းပြီးဖုန်းပြန်ဆက်မယ်…. ” မိန်းမဖြစ်သူ ပြန်သွားသောအခါ လူဆိုးလေးယောက်လုံးခေါင်းစွတ်ကိုချွတ်ကာ…. ” ခွီးတဲ့မှပဲ….မင်းကိုဖဲခေါ်ရိုက်ဖို့က လူကြမ်းတောင်လုပ်လိုက်ရသေးတယ်…..တစ်ဝိုင်းလိုနေလို့တာ ကြံဖန်ပြီးခေါ်ရတာ…” နာရီဝက်လောက်နေတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမဖုန်းကိုမက်ဆေ့ပို့လိုက်ပါတယ်…။ သူ့ ATM ကဒ်ထဲကို ၅ သိန်းချက်ချင်းလွဲပေးဖို့ နဲ့ ငွေရရင် သူတို့က နောက်နေ့မနက် အသက်ရှင်လျက်ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးပို့လိုက်တာပါ…. ခဏနေတော့ ငွေရောက်လာတာနဲ့ ချက်ချင်းထုတ်က တစ်ညလုံး ဘော်ဒါတွေနဲ့ မိုးလင်ပေါက်ဖဲရိုက်ပါလေတော့သည်….။ နောက်နေ့မနက် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဇနီးသည်က […]
ဖစျေ့ဘှတျ ခတျေကွီးမှာ မိနျးမခိုးမှာကို ညီမဖွဈသူ သိသှားသောအခါ….
December 9, 2019 December 10, 2019 MM Live
“ကိုရီး ကုပ်​​ချောင်း​ချောင်းနဲ့ ဘာလုပ်​​နေတာလဲ” “ငင်​ … ” လှည့်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ ကျုပ်​ညီမ​ဗျ အိပ်​ချင်​မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်​… ” နင်​ခုထိ မအိပ်​​သေးဘူးလား ” “အိပ်​မက်​ထဲမှာ ကိုရီး မိန်းမသွားခိုး မယ်​လို့ မက်​လို့ လန့်​နိုးလာတာ ” ” ငါ့နှယ်​ အဲဒါမက်​တာနဲ့ လန့့်​နိုးစရာလား ” ” နိုးတာ​ပေါ့ ကိုရီးနဲ့ညားပြီး ဘယ်​ငတိမ ကံဆိုးမလဲပဲ စိတ်​ပူနေရတာ ” ” ငိမ့်​ … ” မောင်​နှမ အချင်းချင်း​တောင်​ ကပ်​ဖဲ့​နေ​သေးတယ်​… “က​လေး​နေရာ က​​လေး​နေစမ်းပါဟာ သွားအိပ်​​တော့ ” “ဒါနဲ့ ကိုရီးက ဘယ်​သွားမှာလဲ” “အဟိမ်း ” (ပီတိသံကြီးနဲ့ 😁) “မိန်းမသွားခိုးမလို့ … ” “ဟယ်​ […]
လကျရှိဖွဈနတေဲ့ ဇီးပငျကွီးက ထိတျလနျ့စရာအဖွဈအပကျြ
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဇီးပင်ကြီးက ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက် ၉.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ မနက် ၇နာရီခွဲလောက် ဈေးနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတုန်း ဈေးရှေ့နားမှာ လူတွေအထိတ်တလန့်နဲ့ အုန်းအုန်းကျက်ကျက်ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ကိုယ်လဲ စပ်စုချင်တာနဲ့ ပြေးသွားလိုက်တယ်… အနားရောက်တော့ ၄/၅ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ယောက် တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ငိုနေတာတွေ့လို့ တစ်ချို့လူကြီးတွေကဝိုင်းပြီး မေးမြန်းနေကြတယ်…..မိဘနဲ့ဈေးထဲမှာ ကွဲသွားတာလား..မိဘတွေက ကလေးကိုဂရုမစိုက်ဘူး… သားကဘယ်မှာနေတာလဲ…ဘယ်သူကအနိုင်ကျင့်လိုက်လို့လဲ..ဒီလောက်လူတွေအများကြီးရှိတာလုပ်ရဲတာ အံ့ဩပါ့တော်ဈေးကသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုအကြောင်းကြား….. သူလာတဲ့နေရာကိုပြန်လိုက်ကြည့်…ရဲခေါ်မှရမှာ…ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ် စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဝေဖန်အကြံပေး ဆရာကြီးလုပ်တဲ့သူလုပ်..ထုံးစံအတိုင်း ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကရိုက်…ဖုန်းဆက်တဲ့သူကဆက်… ဆူညံပွက်လောရိုက်နေကြတယ်… အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကလေးအမေအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကလေးကိုချော့မော့ပြီးသား ဘာဖြစ်တာလဲ….မကြောက်နဲ့ အန်တီတို့ကို ပြောပြ အန်တီတို့ကူညီပေးမယ်…ဆိုလိုက်တော့…. ကလေးက ငိုနေတာရပ်ပြီးမျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့ စကားမပီတပီ တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်….သားသား.ယဥ..အရှိတော့ဝူးတဲ့….ဟာ…..ဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံး အံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီး အာမေဋိတ်ကိုယ်စီ ထွက်လာကြတယ်.. သွားပြီ…ကလေးသူခိုးတွေ ကလေးရဲ့ယဥကို ခွဲထုတ်ပြီး ရောင်းစားဖို့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းလုက်ရက်လေခြင်းပေါ့…အဲ့ဒါနဲ့ ကလေးရဲ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့…ဟုတ်ပါတယ်..ရွှေပန်းငေါက်တောက်ကလေးပဲကျန်ပြီး.. တကယ်လည်း..ယဥ […]
လကျတို့ပွီးတော့မှ ပွောခငျြသူတှသေတိထား “တို့ဆေး”
December 6, 2019 MM Live
လက်တို့ပြီးတော့မှ ​ပြောချင်သူတွေ သတိထား “တို့ဆေး” ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ…” အစ်မ..အစ်မ..” အမျိုးသမီးက လှည့်ကြည့်ပြီး.. ” အမလေးး…” ” ဟင်…ဘာလဲ? ” ” အမလေး..ကယ်ကြပါအုံး..သူ.. သူ..ကျမကို တို့လိုက်ပြီ ” ” ဟာ..” သောက်ပြသနာတော့ တက်ပြီဟ.. ” ဟာ..မဟုတ်ဘူး အစ်မ ။ အစ်မကို..တို့တာက..” ” အို..မသိဘူး မသိဘူး ။ ရှင်..ကျမကို တို့တာ…။ ကယ်ကြပါအုံး.ရှင်။..ကျမ ကျမ အတို့ခံလိုက်ရပါပြီ.. ” ” ဟင်..” အမျိုးသမီးရဲ့အော်သံကြောင့် ဘတ်စ်ကားကလည်း ထိုးရပ်သွားတယ်….. ခရီးသည်တွေကလည်း..သို့လော သို့လော ဝိုင်းကြည့်ကုန်ကြတယ်…. ကျတော်လည်း..ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး….. အမျိုးသမီးကတော့…..ငါးရံ့ပြာလူးကို ဖြစ်နေတာ….. ” အမလေး..လုပ်ကြပါအုံးနော် ။ ကျမက ကျမ ဟုတ်ပါတယ်နော် […]
ကျား ​ရေကူးကန်တစ်ခု မှာ ၀င်ကြေး 1000 ၊ မ ​ရေကူးကန်မှာဆို 10000 ဘယ်သူဝင်ကူးကူး
December 1, 2019 MM Live
ကျား ​ရေကူးကန်တစ်ခု မှာ ၀င်ကြေး 1000 ၊ မ ​ရေကူးကန်မှာဆို 10000 ဘယ်သူဝင်ကူးကူး ရေကူးကန်တစ်ခုမှာ ကျားရေကူးကန် နဲ့ မ ရေကူးကန်ဆိုပြီး နှစ်ခုခွဲထားတယ် ထူးခြားတာက ယောက်ျားလေးတွေ လည်း မ ရေကူးကန်မှာ ၀င်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ချိုးခွင့်ပြုထားတယ်။ ဈေးတော့ ပိုပေးရတယ်ပေါ့ ဧည့်သည် ။ ။ ဒီမှာရေတခါချိုးရင် ဘယ်လောက်လဲ? ဆိုင်ရှင် ။ ။ ကျား ​ရေကူးကန်မှာဆို 1000၊ မ ​ရေကူးကန်မှာဆို 10000 ဧည့်သည် ။ ။ ခင်ဗျားဟာက ဈေးကွာလှချည်လား ? ဆိုင်ရှင် ။ ။ ကျား ရေကူးကန်လား? မ,ရေကူးကန်လား? မြန်မြန်လုပ် နောက်မှာ တန်းစီနေတာတွေ အများကြီး […]